Jwxo-shiil oo Lagu Dhaawicinayo Zone Dhagaxbuur – Rasaasa News
Jwxo-shiil oo Lagu Dhaawicinayo Zone Dhagaxbuur
Apr 27, 2009 Jwxo-shiil
[Ogadeeniya – April 27, 2009] – Warar xog hoose ah oo naga soo gaadhaya Ogadeeniya ayaa sheegaya in Jwxo-shiil oo hore ay u dhaawaceen ciidamada loo yaqaan [new police] kuwaas oo shacabka Ogadeeniyana u yaqaano Daboqoodhiga, ayaa waxaa xaqiiqowday in uu dhaawacaasi run ahaa. Wararka ayaa sheegaya in muddo bil iyo badh ah uu isaga oo dhaawac ah uu ku dhuumaalaysanayey gabalka Jarar iyo Nogob.
Wararku waxay xaqiijinayaan in uu haatan ka soo kabsanayo dhaawaca ka soo gaadhay dhabarka qaybtiisa hoose [badhyaha]. Ciidamo beeleed si gaar ah u ilaalinayey, ayaa ka samato bixiyey isku day ay qayb ka mid ah ciidamada daboqoodhigu ku doonayeen in ay ku dilaan ama ku qabtaan.
Waxaa aad ugu adkaatay sidii looga soo saari lahaa dhulka Ogadeeniya, waxaaase suurto gal noqotay in lagu daweeyo halkaasi. Waxay ka dayrinayaan ilo ku dhaw in ay aad u adag tahay in uu mar labaad cagihiisa isku taago.
Kooxda Jwxo-shiilada ayaa in badan waxaa ay wadnaha farta kaga hayeen in ay ogaadaan nolol iyo geeri xaalada uu ku sugan yahay Jwxo-shiil.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan waxaa uu jwxo-shiil ka dal baday xubno ka mid ah kooxdiisu Jwxo-shiilada in ay soo gaadhaan gudaha si uu ugu wareejiyo xilka Jwxo-shiilnimada.
Waxaa aad u adag in uusan jirin maanta ruux diyaar u ah in uu qabto xilka Jwxo-shiilnimada oo ay shacabka Somalida Ogadeeniya doonayaan in ay gacmahood kaga ciil baxaan dhibaatada ay u gaysteen halganka ummada.
Wixii war ah ee ka soo kordha xaalada Jwxo-shiil kala soco rasaas.com